Musharaxiin la yimid hab cusub oo lagu ogaanayo Xildhibaanku qofka uu u codeeyey. | allsanaag
Musharaxiin la yimid hab cusub oo lagu ogaanayo Xildhibaanku qofka uu u codeeyey.
Haddii doorashada madaxweynuhu u dhacdo si lamid ah kuwii hore ee Xildhibaanadu ay ku codeeyaan daaha gadaashiisa, ama aan lagu sameyn baaritaan culus waxaa markhaanti ma doonto ah in ay hirgeleyso qaabka sirdoonka Itoobiya ay ugu talo galeen in ay u dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliya.Xildhibaanka xogta siiyey Horseed Media ayaa sheegay in guddiga doorashada ay la gudboon tahay in ay wax ka beddelaan qolka Xildhibaanku codkiisa ku dhiibanaayo. Wuxuu soo jeediyey in Xildhibaanadu ku codeeyaan meel aan xirneyn oo daah lahayn iyaga oo sii jeeda dadkuna arkaayo si qalabkaas casriga ah ee ku xiran Server Cloud yaala meel kale aysan suurta gal ugu noqon in doorashada sirdoonka Itoobiya ku maamulaan.
← Roob Ka Da’ay deegaannada Gobolka Sanaag Galayr oo baalashii laga rifay →